चिसोबाट कसरी बच्ने ? डा. अरुणा उप्रेतीका टिप्स — Imandarmedia.com
पछिल्ला केही दिनयता राजधानी काठमाडौंसहित देशैभर अत्यधिक चिसो बढेको छ । काठमाडौंमा वायु प्रदुषणसहित चिसो बढेको छ । तराईका जिल्लाहरुमा शितलहर चलेको छ ।
जाजरकोटलगायतका हिमाली जिल्लाहरुमा चिसोसँगै भाइरल ज्वरोका विरामी बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा चिसोबाट कसरी घरेलु उपायहरु अपनाएर स्वस्थ रहन सकिन्छ त ? जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीका टिप्सहरुः
बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा सबै उमेर समूहको व्यक्तिले चिसोमा न्यानो कपडामा जोड दिनुपर्छ । एकछिन चिसो सहन सकिन्छ भनेर पातलो कपडा प्रयोग गर्दा यसले दीर्घकालीनरुपमा असर गर्न सक्छ ।
यसर्थ न्यानो कपडा तथा टोपी निरन्तर प्रयोग गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई उनको टोपी लगाईँदा त्यसभित्र सुतीको टोपी प्रयोग गरिदिनुपर्छ । त्यसो गर्दा उनले बिजाउने र चिलाउने कम हुन्छ ।
चिसो समयमा बालबालिकाको हेरचाह सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । चिसोले गर्दा बालबालिकालाई निमोनियालगायतका रोगहरु देखापर्न सक्छन् । त्यसलाई कम गर्न तेल मसाज महत्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ ।
साथै बालबालिकालाई न्यानो कपडा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर धेरै न्यानो कपडाले पसिना आउने र त्यसलाई सफा नगर्दा फेरि पनि निमोनियाको डर हुने भएकाले घाम लाग्दै जाँदा शरिरमा भएका न्यानो कपडाहरुको संख्या घटाउने तथा बेलाबेलामा कपडा खोलेर पसिना आएको नआएको हेर्ने काम गर्नुपर्दछ । पसिना आएमा कपडा फेरीदिनुपर्छ ।
चिसोबाट घरेलुरुपमा बच्ने कोशिष गर्दा उपलब्धि नभएमा, रुघासँगै ज्वरो तथा टाउको दुख्ने समस्या भएमा तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । प्रस्तुतिः रविन्द्र सुवेदी
याद राख्नुहोस् जवान महिलाले भुल्नै नुहुने यी हुन् ६ कुरा
टिप्स: अनुहारलाई १० मिनेटमै कसरी ताजा देखाउने ?